Sida looga qayb-qaato Cunnooyinka Ku-Taagagga ee Xilligan Mahad-celinta! - Cuntooyinka giraangiraha
Thanksgiving ayaa ku dhow geeska waxaanan galaynaa wakhtiga ugu mashquulka badan sanadka! Wax ka baro sida aad uga qaybqaadan karto oo aad u taageeri karto Cunnooyinka Taayirrada sanadkan inta lagu jiro Noofambar gaajo la'aan.
Nagu soo Biir Socodka lagu joojinayo Gaajada
Hal fursad oo qoyska-saaxiibtinimo leh oo lagu taageerayo Cunnooyinka Taayirada Noofembar waa Socodkii lagu dhamayn lahaa gaajada! Nagu soo biir lacag ururinta Nofeembar gaajo, iyadoo lagu martiqaadayo inaad ku socotid dariiqa isdhexgalka ee jadwalkaaga Mall of America! Mar kasta oo uu Mallku furmo bisha Noofambar, ka qaybgalayaashu waxay socon karaan wareegga koowaad ee dabaqa oo ay raadiyaan ereyada koodka sirta ah ee jidka socodka, iyagoo buuxinaya baasaboorka fursad ay ku helaan abaalmarinno sida $250 Mall of America Gift Card!
Socodku waa fursad weyn oo aad kaga hadasho oo aad khibrad u yeelato muhiimada ay leedahay in dadka kale laga caawiyo qoyskaaga. Waa hab ku habboon in wax lagu bixiyo ka hor intaadan mahadcelin! Dhammaan lacagta la ururiyey waxay ku socotaa hay'adaha gargaarka gaajada ee magaalooyinka Twin. Waxaad isku qori kartaa inaad lugayso oo aad lacag u ururiso si gaar ah Cunnooyinka ku socda wheels halkan. Dareen xornimo inaad ku biirto kooxdayada ama aad la samaysato asxaabta iyo qoyskaaga!
Sida looga qaybgalo:
Ku soo biir kooxda Cunnada kooxda Wheels adigoo gujinaya "Ku biir Kooxda" hoostiisa heerkulbeegga.
Samee koox kuu gaar ah ee loogu talagalay Cunnooyinka Gawaarida
Ama si fudud tabaruc samayso si loogu cunteeyo shaagagga qiima kasta ha lahaadee
Iskaa wax u qabso ku samee Cunnooyinka Taayirada Jikada Fursadaha
Cunnadayada giraangiraha jikada fursadaha waxay ku taal 3025 4th Waddada S. Minneapolis iyo wakhtiga ugu mashquulka badan wax soo saarka waa maalmaha ka horeeya Thanksgiving! Mutadawiciinta ku jirta jikada waxay caawiyaan diyaarinta iyo baakadaha cuntada iyo sidoo kale inay u diyaariyaan cuntooyinka loogu talagalay dhalmada maalinlaha ah. Tabarucayaashu waxay isku qori karaan shaqo iskaa wax u qabso oo hal mar ah, ama fursad soo noqnoqota, wax kasta oo si fiican ugu shaqeeya jadwalkaaga. Waxaan ku dajin karnaa kooxo ilaa 5 qof ah markiiba gudaha jikada. Guud ahaan, shaqadu waxay dheertahay 2 saacadood, Isniinta ilaa Sabtida inta u dhaxaysa 8 subaxnimo iyo 4 galabnimo Jikada ma furmi doonto maalinta Thanksgivingka. Hubi in la heli karo oo iska diiwaan geli shaqada halkan!
Isdiiwaangeli si aad cunto u keento
Inta badan xubnaha Cunnooyinka Wheels ee aagga magaalooyinka Twin waxay bixiyaan cunto dheeraad ah oo lagu kululeeyo maalmaha fasaxa ka hor Thanksgiving. Haddii aad xiisaynayso inaad keento cunto bisha Noofambar ama wakhti kasta, fadlan u gudub boggayaga iskaa wax u qabso si aad wax badan u barato oo isdiiwaangeliso!
Macluumaadka loogu talagalay dadka qaata cuntada hadda:
Dhammaan barnaamijyada Cunnooyinka Taayirada Gawaarida waxay siin doonaan cunto dheeraad ah qaataha la keeno horraantii usbuuca si ay weli u cunaan Thanksgiving. Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aad u heli doonto cuntada inta lagu jiro usbuuca Thanksgiving, la xiriir barnaamijka Meals on Wheels ee degaankaaga ama Metro Meals on Wheels 612-623-3363.
Thanksgiving Meals on Wheels waa urur gooni u taagan oo aan xiriir la lahayn Metro Meals on Wheels. Dhacdada nasiib darro ma dhacayso sanadkan sababtoo ah masiibada socota.
Siyaabo kale oo lagu taageero Cuntada Lugaha
Meals on Wheels marwalba waxay aqbashaa tabarucaadka si aan u taageerno shaqadeena ah inaan siino waayeelka iyo kuwa naafada ah naafada ah, cunno nafaqo leh. Haddii aad rabto inaad gacan ka geysato dadaalladeena waad awoodaa ugu deeqo Cuntada Lugaha.